थारु लोक सीपमा रमाउँदै थारु महिला - Pradesh Today थारु लोक सीपमा रमाउँदै थारु महिला - Pradesh Today
थारु लोक सीपमा रमाउँदै थारु महिला
असार २४, २०७६ दिप्तीशिखा चौधरी
दंगीशरण, २४ असार । दंगीशरण वडा नं. ३ कि १७ बर्षिय टिका चौधरीले सानो कपडामा सियोले बुट्टा भर्दै थिइन् । उनले यो माछाको काँडा हो भनिन् । बुट्टाको नाम नै माछाको काँडा थियो ।
हेर्दा आँखा नै किरमिराउँथ्यो । २३ बर्षिय शर्मिला चौधरीले त्रिभूज आकारको बुट्टा भरेकी थिइन् । सानो सियो बुट्टा पनि मसिनो देखिन्थ्यो । सिलाई कटाई सिके पनि हातबाट बुट्टा भर्दा गाह्रो हुन्छ उनले भनिन् । विनिता चौधरी पहिलो पटक कपडा सिलाईमा हात हालेको भए पनि सिप सिक्न पाउँदा खुसी लागेको बताईन् ।
कार्यक्रममा १५ जना थारु महिलाहरुले थारु पोशाक अङ्गीया सिलाई कटाई तालिम सिकीरहेका छन् । उनीहरु लुगा सिउने मेसिन नभएर हातबाट लुगा सिलाईरहेका छन् ।
आज सियो र धागोसँग नजिक भएको ६ दिन भयो तर सिप सिक्ने भन्दै आँखा दुखेपनि आफूहरुलाई रमाईलो लागेको उनीहरुले बताए । हाते सिप सिक्न पाउँदा आफूहरुलाई निकै खुसी लागेको उनीहरुले अनुभव सुनाए । अङ्गीया लेहेंगासँग लगाउने लुगा हो । पहिलेका थारु महिलाहरु लेहेङ्गा र अङ्गीया गाउँथे अहिले ब्लुज लगाउने गर्दछन् ।
थारु भेषभूषा जगेर्ना होस् र नयाँ पिढीले पनि सिकोस् भन्ने उद्देश्यले थारु पोशाक अङ्गीया सिलाई कटाई तालिम शुरु गरेको दाङ हस्तकला संघका अध्यक्ष अशोक थारुले बताए ।
सात दिनसम्म सञ्चालित तालिमको प्रशिक्षकमा थारु सिल्पकार मिनादेवी थारु रहेकी छन् । सहभागिहरु उत्साहपूर्वक सिलाई तालिम सिकिरहेको प्रशिक्षक थारुले बताईन् । दाङ हस्तकला संघ घोराही दाङको आयोजना तथा नेपाल हस्तकला महांसघ काठमाडौँको प्रायोजकमा तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।
यसैबीच दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं. ३ का थारु महिलाहरु ढकिया बनाउन पाउँदा आफूखुसी भएको बताएका छन् । पछिल्लो समय थारु महिलाहरु विभिन्न तालिम मार्फत थारु सिप कला सिक्न पाउँदा खुसी भएको बताए ।
थारु दंगीशरणका थारु महिलाहरुका लागि ढकिया बुनाई तालिम समापनका अवसरमा बोल्ने सहभागी थारु महिलाहरुले यस्तो बताएका हुन् । सहभागी थारु महिला पवित्रा चौधरीले अहिलेको नयाँ पिढीले थारु सामाग्री बनाउन नजानेको अवस्थामा यस्तो प्रकारको तालिमले ठूलो अवसर दिएको बताईन् । तालिममा १५ बर्ष देखि ४० बर्ष उमेर समूहका थारु महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त अवसरमा वडा नं. ३ का अध्यक्ष पूर्ण चौधरीले दैनिक रुपमा थारु महिलाहरुले प्रयोगमा ल्याउने ढकिया पछिल्लो पिढीलाई सिकाउने उद्देश्यले यस तालिमको आयोजना गरिएको बताए ।
थारु युवतीहरु अहिले आफ्नो सस्ंकृतिप्रति चासो नदेखाएको भन्दै यसप्रकारको कार्यमा चासो देखाउन भन्ने आफ्नो सोंच रहेको उनले बताए ।
गुरबाबा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष महेन्द्र चौधरीको अध्यक्षता एवं वडा अध्यक्ष पूर्णबहादुर चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण विरवल चौधरीले गरेका थिए । गुरबाबा सहकारी संस्था रावतगाउँको आयोजनामा भएको १५ दिने तालिममा १३ जना थारु महिलाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । तालिमको प्रशिक्षकमा कमला चौधरी रहेकी थिइन् ।
अंग्रेजीमा शिक्षकलाई तालिम
सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन वा अनलाईनबाट नतिजा प्रकाशन गर्न आग्रह